Wararkii ugu dambeeyay Weerarkii Degmada Balcad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar Al-Shabaab ay Caawa ku qaadeen degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, iyaga oo dagaal kula wareegay.
Dadka Degaanka ayaa sheegay in dagaal kooban oo dhacay Balcad ay Al-Shabaab la wareegeen inta badan degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Intii uu dagaalka socday ayaa Ciidamada AMISOM oo Saldhig ku leh agagaarka Warshadii hore ee Dharka ee Somali Tax ay hoobiyeyaal ku tuureen qeybo ka mid ah degmada taas oo weli aan la shaacin khasaaraha ka dhashay.
Al-Shabaab ayaa degmada Balcad kasoo weeraray laba jiho oo kala ah wadada jaayga ah ee ka timaada dhinaca degmada Afgooye iyo wadada aada dhinaca degmada Jowhar oo uu ku yaallo koontoroolka loo yaqaano Kulanka Yaroow Farxaan oo Ciidamada Dowladda ay fariisin ku leeyihiin.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan Al-Shabaab ay Saldhiga degmada kasii daayeen Maxaabiis badan oo ku xirneyd, kuwaas oo ku eedeysnaa dambiyo kala duwan.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada Balcad ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Balcad,hayeeshee diyaarado ay dul heehaabayaan degmada taas oo cabsi ku abuurtay Shacabka degmada Balcad.